China Inotakurika Ultrasonic transducer Impedance analyzer Kuyera Chishandiso cheParamende Kugadzira uye Fekitori | Qianrong
Inotakurika Ultrasonic transducer Impedance analyzer Kuyera Chishandiso cheParamende
Inotakurika, 8inch skrini, Yakazara yekubata skrini
Ese ma parameter, iyo graph
5s / imwe kupfuura （600tarisa poindi
10 ～ 40dhigirii centigrade
Ultrasonic component analyzer QR520A akateedzana ezvigadzirwa zvemhando dzakasiyana dzeanogadzira zvigadzirwa zvekuyera zvinhu, zvinosanganisira piezoelectric ceramics, transducers, ultrasonic yekuchenesa michina, Ultrasonic epurasitiki yekutengesa muchina, pasi pemvura acoustic, magnetostrictive zvinhu, ultrasonic grinder, ultrasonic atomization, ultrasonic kuchenesa, kudzoreredza radar, ultrasonic inotenderera, phacoemulsification, ultrasonic kuchenesa, ultrasonic motors, uye ese mashandisiro e piezoelectric uye ultrasonic zvishandiso nemidziyo.
1. Screen hombe, yakazara-skrini inobata, ichiita iyo QR520A zvese QR70A-P (komputa vhezheni) chiitiko chekushanda, uye hapana chakaremara nepfungwa yekushandisa komputa.
2. Inovimba neiyo nyowani ine simba ARM processor yekugadzirisa dhata kugona, QR520A kuyerwa kwehuremu kwakanyanya kwazvo kupfuura QR70A-D (ine kuratidza vhezheni), inogona kuzadzisa QR70A-P (komputa vhezheni) chikamu.
3. Yakazara-skrini yekubata oparesheni yakanyanya mushandisi-inoshamwaridzika, haichadi QR70A-D (yega kuratidza vhezheni) nhamba hombe yemabhatani epanyama, nokudaro zvinoshandiswa zvinoshandiswa kuva zvakapusa zvakanyanya, saizi yekugadzira idiki, yakareruka uye inotakurika.
4. Kubatanidza komputa kuti ishande seQR70V-P. Iyo software inowirirana zvizere, mushandisi haasisina kujairana ne software kushanda.
1. Tsinghua University uye Chinese Academy of Sciences Institute of Acoustics zvakabatana zvakagadzirwa zvemichina.
2. Kubva 2001, yedu QR60A / 70A akateedzana ezvigadzirwa kumusika anga ari makore gumi nemashanu, zviuru zvevatengi vanoshandisa muindastiri, yave nyaya yeiyo iyo indasitiri yeultrasound muyero muyero.
3.Pamakore gumi apfuura gumi nemashanu, anopfuura mazana maviri makoreji nemayunivhesiti anga achishandisa zviridzwa zvedu, nekuti anowanzo kuve nezvinopfuura zviuru makumi maviri zvinoregedzwa Agilent zviridzwa, 4294A. Zvishandiso zvedu zvakaedzwa nguva zhinji nezviridzwa zveAgilent zvinounzwa kunze. Zvinoitika kuti mhedzisiro yezviridzwa zvedu yakavimbika zvachose.
4. Zvishandiso zvedu zvave kushandiswa nemakambani mazhinji eGerman uye eU.S. ekuyera seyimbo yekuyedza. Chishandiso ndiyo kiyi yekudzora mhando. Kana tikasarudza chiridzwa chakagadzirwa neChinese. Tinofanira kuvasimbisa pahwaro hwekuvimba kwakazara.
Pashure: 40Khz Ultrasonic Nano Spray Chishandiso ine Yakakwira Frequency Kutsiva Tsika Mbiri-fluid Spraying
Zvadaro: 20Khz Ultrasonic Yakasarudzika Welding Horn neAnodizing Kurapa
3000W Hot-kunyauka Kuiswa chisimbiso kwePurasitiki End C ...